पर्यटकका लागि विद्युतीय बस :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
अर्थ संसार, काठमाडौं– ललितपुर महानगरपालिकाले पर्यटकलाई सुविधा दिने उद्देश्यले विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
महानगरको भित्री भागमा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यमा बस सञ्चालनको योजना बनाइएको हो । कुनकुन रुटमा कति बस आवश्यक छ भनेर अध्ययन भइरहेको महानगरले जनाएको छ ।
पुल्चोकबाट मङ्गलबजार र पाटनढोकाबाट मङ्गलबजारसम्म बस सञ्चालन गर्ने योजना रहेको प्रवक्ता महर्जनले बताउनुभयो । पाटनभित्र रहेका दरबार क्षेत्रसँगै अरु मन्दिर, विहारलगायतका पर्यटकीय गन्तव्यलाई समेटेर रुट बनाइने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा छिट्टै सञ्चालन गर्ने योजना छ ।” महानगरले साझाको रु एक करोडको शेयर खरीद गरेर विभिन्न रुटमा बस सञ्चालन भइरहेको छ । रासस
शेयर भर्न छुटाउनु होला ? तीन कम्पनीको हकप्रद शेयर बजारमा
गरिमाको छलाङ्गमा चमत्कार, खुद नाफा ५०.५१ प्रतिशत वृद्धि, कति छ प्रतिशेयर आम्दानी ?
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा ११ करोड ११ लाख मात्रै, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
बैशाखभित्र कम्पनीहरुलाई साधारणसभा गर्न चटारो, ८ वटा कम्पनीको साधारणसभा हुँदै, कुनको कति बोनस ?(सूचिसहित)
प्रोग्रेसिभ फाइनान्सको सबै सुचकमा उत्साहजनक प्रगति